वैदेशिक रोजगारमा किन सुत्यासुत्यै ज्यान... :: सुदीप श्रेष्ठ :: Setopati
गिरीश गिरी र प्रकाश ढुंगाना काठमाडौं, चैत १८
'वैदेशिक रोजगार सिलसिलामा कति नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्, त्यसको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन,’ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक शशिकुमार लम्सालले सेतोपाटीसँग भने, ‘फिल्डमै गएर डाटाबेस विश्लेषण गरी केही निष्कर्ष निकालिएजस्तो मलाई लाग्दैन।’
'कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनले सुतेकै ठाउँमा नेपाली कामदारहरु मर्ने समस्या सबैभन्दा धेरै मलेसिया र कतारमा रहेको देखायो,’ उक्त कार्यदलका सदस्य तथा गंगालाल अस्पतालका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइरालाले भने।
दूतावासले त्यस्तो रिपोर्ट जम्मा गर्ने ‘दु:ख' अहिले पनि गरेको छैन।
कम्तिमा ‘पाइलट प्रोग्राम’ बनाएर मलेसिया र कतार जाने कामदारहरुको राज्यले आफैं मुटु परीक्षण सुरु गर्नुपर्ने सुझाव डा. रामेश कोइरालाको छ। यी मुलुकका दूतावासबाट मृत्यु भएका कामदारको 'पोष्टमार्टम' रिपोर्ट झिकाउन राज्यले तुरुन्त पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १९, २०७४, ०५:१५:०१